विचार / बहस Archives | Page4of 12 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - जीवनमा गोप्य राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण पक्ष ! - page 4
काठमाडौं । चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री हुन् । उनको जीवन दर्शन पूर्विय दर्शनमा एक महत्वपूर्ण दर्शनका रुपमा लिइन्छ । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनकै कुटिल चालका कारण नै सम्राट सिकन्दर भारत छोड्न बाध्य भएका थिए । चन्द्र गुप्त जस्ता एक सामान्य बालकलाई उनले भारतको सम्राट नै बनाईदिए । तिनै महान व्यक्तिले भनेका जीवनमा गोप्य राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण पक्षहरु यस्ता छन् । गोप्य राख्नुपर्ने पहिलो कुरा चाणक्य नीतिका अनुसार पुरुषले गोप्य राख्नुपर्ने पहिलो कुरा धनको लाभ र हानीको बारेमा कसैलाई पनि नभन्न उनले सुझाएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ज्योतिष शास्त्रमा अंकको ठूलो महत्व छ । अंक अनुसार नै मान्छेको भविष्यबारे बताउँछन् ज्योतिषहरु । विवाहका लागि अंकमिलान एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्लो समयमा सम्बन्धहरु सहजै विग्न थालेपछि यसको महत्व झनै बढेर गएको छ । जन्मदिनको मुलाङ्क अनुसार कुन केटा केटीको जोडी बन्ने कि नबन्ने निर्धारण गर्छन् ज्योतिषहरु । के हो मुलाङ्क ? कुनै पनि ब्यक्तिको मुलाङ्क उसको जन्मदिनको गतेको संख्याको कुल हो अर्थात तपाइँको जन्म मिती १० गते हो भने तपाइँको मुलाङ्क १ हो तर ११ गते हो भने १ं१. २ हुन्छ । १४ गते जन्मदिन हो भने मुलाङ्क १ं४. ५ हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
गर्मिमा तौल घटाउन चाहानु हुन्छ ? गर्नुस ५ काम
काठमाडौं । तपाई आफ्नौ तौल घटाउन चाहनुहुन्छ तर जे उपाय अपनाउँदा पनि केहि फाइदा हुन सकेको छैन भने गर्मीको समयमा यी काम गर्नुस तपाइलाइ तौल घटाउन अवश्य नै सहयोग मिल्नेछ । १० दहीः गर्मीको महिनामा दहीको प्रयोग गर्नाले तपाइको लागि धेरैनै फाइदा पुग्नेछ । दहीले तपाईलाई पोषण प्रदान गर्नुको साथै शरीरमा गर्मी बढ्न पनि दिँदैन । यसले तपाईको तौल पनि घटाउन मद्धत गर्छ । दहीले तपाइलाइ भोको महसुुस गराउँदैन जसले अन्य धेरै खान पनि रोक्छ । २० मोहिः दहीबाटै बन्ने माहीको प्रयोग पनि तपाइको लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
सोमबार यी कामहरु गर्दा शुभ, अन्य बार कस्तो ?
काठमाडौं । तपाई कुनै काम गर्दै हुनुन्छ भने बार र राशी अनुसार गर्नु उत्तम हुन्छ । हिन्दुधर्म शास्त्रका विभिन्न धर्म ग्रन्थ र वास्तु शास्त्रले कुनै कामको शुभ फल र लाभका लागि केही प्रावधान गरेको छ । जस अनुसार तपाईको खानपान, हिडडूल, कामको शुरुवातल लगायतका विषय रहेका छन् । आइतबारः आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, पलाकिमा बस्ने, राजसेवा, गाइगोरु, किन बेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औसधि निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनि, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो बस्तुको कारोबार उपयुक्त हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
रमेश विश्वकर्मा काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजभोलि दोहोर्याइरहने शब्द हो– विश्व राजनीतिलाई नेपालको परिवर्तन ठूलो सिकाइ बनेको छ वा विश्वले नेपालबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको राजनीति सिकेको छ । यी भनाइका पछाडि बहुअर्थ रहेको छ । पहिलो कम्यूनिस्ट आन्दोलन विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनेको बेला शक्तिशाली कम्यूनिस्ट पाटीको निर्माण गरेर विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागृत गर्न खोजेको पाइन्छ । दोस्रो विश्व राजनीतिलाई गौतम बुद्धको देशले शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रतिरोधको राजनीति र नेपालको दलित
टासी टेवा डोल्पो काठमाडौं । केही महिनाअघि तिजडाँडा, दैलेखको हिमालय आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरुले दिउँसोको खाना खान अस्विकार गरे । विद्यालयको प्रशासन केही घण्टाको लागि बन्द भयो । कारण थियो, एक दलित भान्सेले भान्सामा छिरेर दिउँसोको खाना तयार पारेकोमा । त्यसको प्रतिउत्तर स्थानीय दलितका अधिकारकर्मीहरुले विद्यालयका शिक्षकहरु माथि विद्यार्थीहरुलाई उक्साएको आरोप लगाए । समृद्धिको गफमा व्यस्त हामी उक्त घटनाले समाजमा विद्यमान पुरानो सोचहरुले अझै पनि कसरी दलितहरुलाई कमजोर बनाई रहेको छ त भन्ने चरितार्थ गरेको छ । पक्कै पनि त्यो नौलो घटना थिएन ।	थप पढ्नुहोस्
अनुहार सुन्दर बनाउन अपनाउनुस व्युटी फुड्स
काठमाडौं । बनारमा उपलब्ध विभिन्न व्युटी प्रोडक्टद्वारा अनुहारलाई आकर्षक बनाउन त सकिन्छ तर त्यस्ता प्रोडक्टको प्रभाव क्षणिक हुने गर्छ । यसको सट्टा प्राकृतिक रूपमै उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका खानेकुराको सेवन गरेर अनुहारमा प्राकृतिक एवं दीर्घकालीन सौन्दर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनुहार, छाला तथा सम्पूर्ण शरीरलाई स्वस्थ एवं आर्कषक राख्न सकिने त्यस्ता खानेकुरालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘व्युटी फुड्स’ भन्ने गरिन्छ । व्युटी फुड्सको नियमित सेवनले रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छ, छालाको कोषिका स्वस्थ हुन्छ र अनुहारको सुन्दरता वृद्धि हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कपालले नै मानिसलाई सुन्दर देखाउने गर्छ । कपालकै कारण मानिसको व्यक्तित्व पनि आकर्षक देखिन्छ । यही कुरालाई बुझेर नै हिजोआज महिलाहरू लुगाको साथमा कपाललाई समेत आकर्षक देखाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । गर्मीमा कपाललाई खुला राख्न नमिल्ने र कुनै आर्कषक हेयर स्टाइल पनि बनाउन नमिल्ने हुँदा धेरै महिलालाई आफ्नो कपालको स्याहार गर्न कठिनाइ हुने गर्दछ । तपाईंलाई पनि यस्तो समस्या छ भने गर्मीमा यस्तो हेयर स्टाइल बनाउन सकिन्छ, जुन स्टाइलिस्ट हुनुका साथै आकर्षक तथा कम्फरटेबल पनि हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
मन र शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न सूर्य नमस्कार
काठमाडौं । तपाईं निरोगी बन्न चाहनुहुन्छ रु तन्दुरुस्त रहन चाहनुहुन्छ रु दिनभर ताजा महसुष गर्न चहनुहुन्छ रु शरीर लचकदार बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने, एउटा उपाय छ । उपाय सजिलो छ । सूर्य नमस्कार । सूर्य हामीलाई थाहा छ । नमस्कार पनि थाहा छ । दिनदिनै हामी कति जनालाई नमस्ते टक्र्याउँछौं । कतिको नमस्ते पनि स्विकार गर्छौं । तर, सूर्य नमस्कार एक योगासन हो । यसको विधी अलि भिन्न छ । प्राचीन समयदेखि योगबाट मन र शरीरलाई स्वस्थ्य राखिने अभ्यास भएको पाइन्छ । योगले शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्छ । शरीरको अतिरिक्त विकार हटाउन, मनलाई शान्त तुल्याउन, स्फूर्ति ल्याउन योग अनिवार्य छ ।	थप पढ्नुहोस्
तपाईंमा कति छ आत्मविश्वास ? जाँचिहेरौँ
काठमाडौं । जीवन संघर्ष हो । संघर्षको अवस्थाले नै हामीभित्र लुकेको आत्मविश्वासलाई जगाउँछ । केहीले यसलाई पहिचान गरी बाधा-व्यवधानलाई पार गरी अगाडि बढ्छन् भने केही मानिस त्यही अलमलमा फस्छन् । अगाडि त बढ्ने तर कसरी । कठिन समयमा आत्मविश्वासलाई पहिचान गर्ने व्यक्तिले नै सही अर्थमा जीवन जिउँछ । समाजमा त्यस्ता थुप्रै व्यक्ति छन् जोसँग योग्यता एवं कार्यकौशल त छ तर उनीहरू असफल छन् । यस्ता व्यक्ति मनबाट मजबूत भएर पनि कठिन परिस्थितिमा कमजोर हुन पुग्छन् । त्यही जीवनमा विषम परिस्थितिहरूबाट पार लाग्ने उत्साहले नै व्यक्तिलाई उसको लक्ष्यसम्म उभ्याउँछ ।	थप पढ्नुहोस्